News - Faa'iidada miiska isku laaban
Laabista miiska faa iidada u leh astaamaha
1. Raad yar
Sida magaca ka muuqata, miis isku laaban waa miis la laaban karo. Tani waa astaamaha aasaasiga ah ee hal-abuurka miiska isku laaban. Haddii boosaska gurigaaga ka kooban yihiin, sax? Miisaska isku laaban ayaa faa'iido kuu leh adiga, fur markii aad u baahatid, laabi markii aadan u baahnayn, oo dhinac iska dhig, adiga oo boos fara badan badbaadinaya.
2. dhaqaale ahaan
Xaqiiqdii, qiimaha miiska isku laaban guud ahaan guud ahaan ma aha mid aad qaali u ah, sidaa darteed waa alaab guri isku laaban, aadna ugu raaxeysa nolosheena inaad dhaqso u keento isla waqtigaas, laakiin sidoo kale kaydso qarashkeena.
3.Waad si toos ah u hagaajin kartaa Xagasha
Mid ka mid ah, kharashka mashiinka wax taaj oo kale kharashka yar yahay, gaar ahaan caaryada wax taaj oo kale
Markaad sameysid alaabo la mid ah, qiimaha mashiinka wax lagu duubo oo dharbaaxo ah wuxuu ku saabsan yahay 1/3 ~ 1/2 mashiinnada irbadda, qiimaha wax soo saarka badeecadaha sidoo kale wuu hooseeyaa.
Marka labaad, waxay leedahay waxqabad wanaagsan
Qalabka wax lagu duubo, biilka waxaa sameeya madaxa mashiinka oo ku hoos jira cadaadis hoose iyo cadaadis hoose, badankooduna waa 0.2-1.0Mn.Downblown, sidaa darteed walwalka hadhaaga badeecaddu waa yar yahay, xajmiga, saameynta, foorarsiga iyo waxqabadka culeyska deegaanka ayaa ah sare, sidaas darteed, waxay leedahay waxqabad kafiican. Marka la isku duro cirbadeynta, dhalaalku wuxuu sii maraa orodyahanka caagga ah iyo irridda cadaadis sare (15-140yPA), taas oo horseedda kala-qaybsanaan aan caadi ahayn oo walaaca.
Tusaale ahaan, kuraasta isdabamarinta, kuraasta godad la'aanta ah marka la barbardhigo kuraasta FRP iyo kuraasta duritaanka balaastigga ah ee adag. Kursiga wax taaj oo kale ee dharbaaxo ayaa leh faa'iidooyin kala duwan 1. Raaxo, qaab-dhismeed godan oo laba-jibbaaran, oo dabacsanaan ka buuxdo, kursi raaxo leh; 2.2, caabbinta saameynta, iska caabinta kuleylka, caabbinta biyaha wanaagsan, oo aan ku xirneyn qorraxda, roobka, saameynta dhaxan ee ay keento dildilaaca iyo dhaawaca. .
Waxay leedahay saameyn adag oo xoog leh iyo hanti ka hortagga dildilaaca
Waxyaabaha cufnaanta sare leh ee loo yaqaan 'vinyl' (PE) waxay leeyihiin culeys aad u sarreeya oo molikal ah marka loo eego caagagga lagu durayo fasalka. weelasha reagent ama foosto.
Afar, fududahay in lasoo saaro dhumucda darbiga kaladuwan ee isla alaabooyinka wax lagu duubo
Maaddaama caaryada dharbaaxo ay ka kooban tahay caarro xun, dhumucda derbiga ee sheyga waa la beddeli karaa iyadoo si fudud loo hagaajinayo farqiga u dhinta ama xaaladaha mashiinka mashiinka, taas oo faa'iido badan u leh sheyga oo aan si sax ah u xisaabin karin dhumucda darbiga loo baahan yahay Qiimaha beddelaadda dhumucda darbiga ee badeecada ayaa aad ugu badan wax ka qabashada wax lagu durayo.
Qaab-dhismeedka afuufa wuxuu soo saari karaa alaabooyin aan caadi ahayn oo isku-dhafan oo leh qaabab adag
Marka la barbardhigo cirbadda cirbadeynta, si loo soo saaro laba ama in ka badan oo ah alaabooyin ah, iyada oo loo marayo qallafsanaanta suunka, iskudhafka dareeraha ama alxanka ultrasonic.